Akhriso Xogo Qarsoon oo ku saabsan Muqdisho iyo Abu Dhabi oo la mataaneynayo. – Kismaayo24 News Agency
Akhriso Xogo Qarsoon oo ku saabsan Muqdisho iyo Abu Dhabi oo la mataaneynayo.
by admin 4th February 2018 022
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir C/Raxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa safaaradda Imaaraadka eek u taalla Muqdisho ku booqday danjiraha Imaaraadka ee Soomaaliya Maxamed Axmed Cismaan Al Xamadi.
Al-Xamadi iyo Yariisow ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal mideynta naqshadaha Muqdisho iyo Abu Dhabi iyo iskaashiga labada dal.
Danjire Al-Xmaadi ayaa kulanka ku ballan qaaday in dowladda Imaaraadka diyaar u tahay wada shaqeynta Muqdisho iyo Abu dhabai sidoo kalena ay ka wada shaqeynayaan nooc kasta oo horumarinta la xiriirta.
DEG DEG: Ciidamo Careysan oo Qaab Beeleed u Abaabulan oo Kismaayo lagu arkaayo Iyo Xaaladda oo kacsan
Qodobada ugu Culus ee lagu balansan yahay Shirka Madaxda DF & D/Gobaleedyada oo la ogaaday
TOP NEWS: Maxaadan Ogeyn oo ka soo baxay Kulan Xasaasi ah oo madaxtooyada Muqdisho ku dhexmaray Madaxweynaha Soomaliya iyo Wafdi ka socda…+Sawirro
Sawirro: Wasaaraddaha Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya iyo Jabuuti oo Heshiis gaaray